Puntland oo Maarso u qabaneysa shir Hogaanka DFS iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada – Kalfadhi
Puntland oo Maarso u qabaneysa shir Hogaanka DFS iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay inuu maamulkiisu, bartamaha bisha Marso, qaban `doono shir ay khilaafkooda ku dhameynayaan Hogaanka Dowladda Fedraalka Soomaaliya (DFS) iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada (DG-yada). Madaxweynaha DFS, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayuu sheegay inuu shirkaas ka codsaday puntland iney ku qabato magaalda Garoowe.
“Runtii arrintaas (Kulan ka dhacay shalay Garoowe) waxay horseeday in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu soojeediyo in shir leysugu yimaado bartamaha bisha saddexaad, uuna ka codsaday Puntland in ay gogoshaas marti-geliso” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni. “Anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Puntland waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed, oo loogu gogol-xaarayo in Soomaaliya midnamadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo, lagu qabto magaalada Garoowe” ayuu raaciyey hadalkiisa.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu sheegay in, shir ay Puntland shalay uga furtay magaalada Garoowe Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS), kuwa Dowlad Goboleedyada (DG-yada) iyo Madaxdii dowladihii ka horeeyey xukumadda hadda jirta, uu albaabada u balaqay bilowga waddo ay ku dhameen doonaan khilaafka u dhaxeeya Hogaanka DFS iyo kuwa DG-yada.
“Shirkaasu waxa uu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo” ayuu yiri Madaxweynaha maalin ka hor la caleema-saaray ee Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni. Intaas waxa uu raaciyey in sababta ay Puntland kulankaas u qabatay ay ahayd markii caleema-saarkiisa uu Islaan Ciise Islaan Maxamed kasoo jeediyey in madaxdii halkaas isugu tagtay ay “Xalay Dhalay” ka noqdaan dhib iyo uur-ku-taalo wixii horay uga dhaxeeyey, dadkii kadaba hadlayna ay aqbaleen soojeedintaas.
Madaxweyne Deni waxa uu sheegay in kulankaas uu, sidoo kale, gogol-xaar u noqday inuu burburiyo caqabadihii hor taagnaa in ay kulmaan Madaxda DFS iyo kuwa DG-yada dalka. “Kulamadaas ay Madaxda Dowladda Federaalka iyo Madaxda Dowladaha Xubnah ah Federaalka isku arkeen wuxuu gogol-xaar u noqday iney kulan maanta wada yeesheen” ayuu yiri Deni. Kulankaas waxa uu ujeedkiisu ahaa, sida uu Madaxweyne Dene sheegay, inuu wadada u xaaro sidii ay danta dalka uga sii wada shaqeyn lahaayeen Hogaanka DFS iyo kuwa DG-yada.
Soomaalida oo dhan ayuu Madxaweyne Deni ugu baaqay in ay ku taageeraan isu-imaatinkaas la isku soo hor fadhiisanayo, kadibna ay ku wada hadli doonaan, si ay farqiyaadkooda u xaliyaan Madaxweynaha DFS, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xukuumaddiisa oo meel ah, iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada oo meel kale ah. Laakiin, waxaan la hubin in ay siyaasiyiinta kale, oo qaarkoo soo hogaamiyey dalka, qeyb ka yihiin kulanka la qaban doono bisha Maarso.
Guddiyada Golaha Wakiillada Puntland oo la shaaciyey
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay inuu la dhacay natiijada shirarkii Garoowe